रोशनीले किन लिईन् गगन थापाको नाम ? « रिपोर्टर्स नेपाल
रोशनीले किन लिईन् गगन थापाको नाम ?
प्रकाशित मिति : 2019 October 2, 10:01 pm
पत्रकार शिवाकोटी एक्कासी कोठामा छिरेर शरिरमा छोएको आरोप
काठमाडौं, १५ असोज । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि जबरजस्ती करणी भएको आरोप लगाउने महिला कर्मचारी रोशनी शाहीले आफूमाथि कुनै दुव्र्यवहार नभएको दाबी गरेकी छिन् । उनले आज (बुधबार) प्रहरीकहाँ पुगेर लिखित निवेदन दर्ता गराउँदै महराले आफूमाथि कुनै दुव्र्यवहार नगरेको जिकिर गरेकी छिन् । उनले यो प्रकरण बाहिर ल्याउने पत्रकार अजयबाबु शिवाकोटीको फोटोसहितको समाचार लिंक सेयर गर्दै शिवाकोटीलाई गगन थापाको पिए भन्दै थापाको पनि नाम जोडेकी छिन् ।
शाहीले यो प्रकरण बाहिर ल्याउने पत्रकार अजयबाबु शिवाकोटीको फोटोसहित रहेको सभामुखको यौनकाण्ड सार्वजनिक गर्ने यी हुन् साहसिक पत्रकार शिवाकोटी शीर्षकको सवलपोष्ट डटकममा प्रकाशित समाचारको लिंक शेयर गर्दै उनले ती पत्रकारको बारेमा उल्टै गम्भिर आरोप लगाएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्,-“यहि पत्रकार हो मलाई फसाएर महरा सर बिरुद्द बोल्न लगाउने मेरो कोठामा एक्कासि आएर ठाउँ-ठाउमा मलाई छुने गगन थापाको पिए लाई किटानि जाहेरि दिनेछु ।”
शाहीले यो प्रकरण बाहिर ल्याउने पत्रकार अजयबाबु शिवाकोटीलाई कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री गगनकुमार थापाको पिएको संज्ञा दिएकी छिन् । उनले आफूलाई ठाउँ ठाउँमा शिवाकोटीले छुने काम गरेको भन्दै उनीविरुद्ध नै किटानी जाहेरी दिनेपनि चेतावनी दिएकी छिन् ।